« Toekarena manga »: mila fiarovana ny fari-dranomasina eto Madagasikara | NewsMada
« Toekarena manga »: mila fiarovana ny fari-dranomasina eto Madagasikara
Ny fiandohan’ny herinandro teo, natao tany Naïrobi, ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny « toekarena manga », ny fitrandrahana ny fari-dranomasina. Nandray anjara tamin’izany ny minisitry ny Toekarena sy teti-pivoarana, i Napetoke Arsonaivo Marcel sy ny minisitry ny Jono, Andriamananoro Augustin.
6.000 ireo nandray anjara tamin’ny fivoriana avy amina firenena samihafa, nandinika sy namakafaka ny hahazoana tombontsoa ara-toekarena amin’ny fari-dranomasina, indrindra ny ho fiarovana izany. Lohahevitra nandritra izany fivoriana izany ny « Toekarena manga sy ny fandaharanasa hatramin’ny taona 2030 hisian’ny fampandrosoana maharitra ». Voadidina ranomasina 5.000 km i Madagasikara, nefa matetika ny fidiran’ny hafa an-tsokosoko.
« Misy famatsiam-bola ho amin’izany toekarena manga izany ka nambara ho laharam-pahamehana ny fitrandrahana ny harena anaty ranomasina hatao amin’ny ara-dalàna », hoy ny minisitra, i Napetoke Arsonaivo Marcel. “Hanomezana asa ho an’ny tanora izany na hamoronan’izy ireo asa vaovao”, hoy ihany ny minisitra.
Mitaky fampiasana teknolojia vaovao
Mitaky fampiasana teknolojia vaovao anefa izany. Hatramin’izao, tsy hita ny fifehezana izany raha ny fahitana ireo sambo miditra an-tsokosoko manjono amin’ny fari-dranomasina eto an-toerana sy manondrana ny harem-pirenena, toy ny andramena. Samy nanaiky daholo ireo solontenam-panjakana tonga nivory ho fiarovana ny ranomasina.
Niarahan’ny rehetra nanapaka, tamin’io fivoriana io, ny fanafainganana fandaharanasa sy ny tanjona ho an’ny fampandrosoana maharitra (ODD) nataon’ny Firenena mikambana. Raha fintinina, hahazoana mamorona asa sy miady amin’ny fahantrana ny ranomasina, ny ony ary ny farihy. Ireo no fototry ny fivoriana.
Niantoka ny delegasiona malagasy ny Pnud, ary nanararaotra izy ireo nihaona tamin’ny minisitry ny Jono sy fiarovana ny morontsiraka any Kanada, i Jonathan Wilkinson, nifanakalo hevitra momba izay tokony hatao. Ho hita eo ny fampiharana izany amin’ny fitondrana manaraka.